सधैं लकडाउनमा गृहमन्त्री — Raranews.com
विपत् व्यवस्थापन कोषको डेढ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय राखेर विपतमा खटेका प्रहरीको तलबबाट कोषमा रकम जम्मा गर्दै गृह मन्त्रालय
१. विपत् प्राधिकरण सुनसान, सेनाको ब्यारेकबाट काम
बरु, छाउनीस्थित नेपाली सेनाको गणमा अहिले चहलपहल छ । कोरोना क्राइसिस मेनेजमेन्ट टिम (सिसिएमसी) कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ, जब कि यस्तै वेलाका लागि प्राधिकरण गठन गरिएको हो । प्राधिकरणलाई भने तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको जिम्मेवारीमा समेटिएको छ । प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले उच्चस्तरीय समितिले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने हो, अहिलेको समस्या आफैँमा जटिल छ ।’
२. विपत् कोषमा डेढ अर्ब, प्रहरीको तलब काटेर कोष बढाउँदै सरकार
३. शंकास्पद बिरामी ल्याउने जिम्मा गृहको, फिल्डमा सेना खटियो
गत ९ चैतमा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको एउटा निर्णय थियो । शंकास्पद बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) गठन गरेको थियो । यसका लागि हरेक जिल्लामा प्रहरीलाई तालिम दिएर जिम्मेवारीमा खटाउने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेका थिए । तर, आफैँ सहभागी भएको समितिले दिएको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले कार्यान्वयन गराएका छैनन् ।
४. भारतबाट हिँड्दै सिमाना आइपुगेका नेपाली मजदुरको अवहेलना
५. यहीवेला डिआइजीहरूको दरबन्दी कटौती
यहीवेला डिआइजीको प्रशासतर्फका २६ मध्ये १२ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट सयौँ प्रहरीको करिअरमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । प्रहरीमा दरबन्दी थपघट गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, विनासर्वेक्षण डिआइजीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । यसबाट बढुवाको मुखमा रहेका सयौँ प्रहरी निराश भएका छन् । एकातिर देश संघीयतामा गए पनि प्रहरीको समायोजन अहिलेसम्म भएको छैन, अर्कोतिर गृहले डिआइजीको दरबन्दी भने यहीवेला कटौती गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार
डब्ल्यूएचओको चेतावनी- ‘लकडाउन खोल्न हतार नगर्नू, महामारी झन् घातक बन्न सक्छ’